Thermogenic Sweet Sweat: Chii icho uye mashandisiro acho?
Natural repellent: kuzviita sei? Ona mabikirwo
Zvokudya	 18 February 2016
Kudya zvakanaka hazvireve chete kuti kudya kudya kwakakodzera panguva dzakakodzera, asi zvakare kusarudza chikafu chakakodzera sosi. Mupfungwa iyi, zvekudya zve organic zviri kuwedzera chisarudzo cheavo vari kutsvaga chikafu chechisikigo uye chine hutano. Unoda kunzwisisa zvakawanda nezvenyaya iyi? Saka ramba uchiverenga uye uone kuti ndezvipi uye zvakanakirei izvi zvekudya.
Zvekudya zvekudya zvese zvikafu zvisina chero mhando yemakemikari kupindirana kana magene kuchinjwa kuvimbisa kuramba kwavo tupukanana, semuenzaniso.
Nekudaro, chikafu ichi hachina mishonga yekuuraya zvipuka, mahormone, zvipenyu zvakagadziriswa genetiki uye mafetiraiza emakemikari. Muchidimbu, rudzi urwu rwechikafu rusununguko kubva pane chero chinhu chisina kunyatsoitika.
Ndeapi mabhenefiti ezve organic chikafu?
Kudya chikafu chinogadzirwa inyaya inosanganisira kunatsiridza hupenyu hwehupenyu hwese, sezvo izvi zvekudya zvichikwanisa kuunza mabhenefiti akakosha ekushandisa uye nehutano hwakazara. Pakati pezvakanaka ndezvi:
Inoderedza kunwa kwezvinhu zvine chepfu
Muzvinzvimbo zvepamusoro pane rondedzero yevatengi vezvipembenene zvakanyanya pasi rose, Brazil inoshandisa huwandu hwezvipembenene izvo, kana zvikakamurwa pakati pevagari, zvinogona kukonzera anopfuura marita manomwe pamunhu wese (7).
Kunyangwe izvi zvisingareve kuti iwe unwisa iwo ese marita manomwe, ichokwadi kuti chidimbu, kunyangwe chidiki, chinopera mune yako system. Sezvo zvinhu izvi zvisina kugadziriswa, pamusoro pemakore iwe unogona kutambura nekudhakwa nezvinhu izvi nekuda kwekuti iwe unoedza kuve neutano.
Nezvikafu zve organic, kune rimwe divi, izvi hazviitike sezvo zvichinyatso kushomeka zvekushandisa zvemakemikari, izvo zvinoderedza kudyiwa kwezvinhu zvine chepfu.
Kunyanya, fungicides nemishonga yesora inozivikanwa neWorld Health Organisation (2) sevamiririri vanogona kuve zvinhu zvine njodzi pakuonekwa kwekenza dzakasiyana.
Izvi zvinonyanya kukonzerwa nehunhu hwemakemikari hwezvinhu izvi, izvo zvinoita kuti muviri utambure nekukura zvisina kusarudzika kukura kwesero, izvo zvinoguma nemamota akaipa.
Naizvozvo, nekushandisa organic iwe unoderedza njodzi yekutambura nekenza inoitika nekuda kwekuvapo uye kuwanda kwezvinhu izvi mumuviri wako.
Iva nehutano huri nani
Kunyangwe paine kupokana pamusoro pekuti nderipi rudzi rwechikafu chine kukosha kwakanyanya kwehutano, zvinokwanisika kutaura kuti zvekudya zvine organic zvine hutano hwakaringana.
Izvi zvinoreva kuti kuraswa kwezvicherwa uye zvinovaka muviri zvinoumbwa nekudyiwa nezvirimwa izvi zvinowanzo kuve nemhedzisiro yemuviri. Zvinenge zvakafanana nekutaura, semuenzaniso, kuti ine hutano uye ine hutano hwakanaka hwekudya kudya mazana maviri emacalorie emakarotsi pane mazana maviri macalorie echokoreti.
Nepo uyu zvakare uri mubvunzo wepamoyo, edza kuravira chikafu chakajairwa uye neye organic vhezheni yacho. Izvo zvinonyanya kuitika kuti iyo organic vhezheni ichawana mukuravira kwako uye kuonekera senge kutsva, zvakanyanya zvakasikwa uye zvinowedzera kufadza.
Naizvozvi, kudya organic chikafu zvakare kunovimbisa yakawanda mhando yekudya zvine chekuita nekuravira, kunova kunonakidza.
Organic chikafu chikafu chisina chemakemikari zvinowaniswa uye zvinogona kuve zvine chepfu, kuve nechokwadi chakakosha hutano mabhenefiti. Pamusoro pekudzikira kwehuturu uye njodzi dzegomarara, izvi zvekudya zvakare zvinonaka uye zvine hutano hwakanaka hwehutano. Saka, kana iwe uchida chikafu chine hutano, usakanganwa kufunga nezvekudya izvi zvekudya.
Matipi erimwe rakanakisa ganda!
Ginger mvura kudzikira huremu
Naltrexone: Dzidza chokwadi nezve uyu mushonga!
Liposuction: Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kuvhiya uku HERE!
Muviri Pombi nezvakanaka zvawo